Igumbi elitsha le-Luxury, La Casita Hua Hin - I-Airbnb
Igumbi elitsha le-Luxury, La Casita Hua Hin
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNing
Wamkelekile kwiflethi yam entsha ebizwa ngokuba yi-'Lacasita' eyimizuzu nje emi-5 ukuya elunxwemeni nakwiivenkile ezinkulu ezimbini. Imi kwindawo esembindini wesixeko. Ukutya kwesitalato kulula ukukufumana
Eli ligumbi lokulala eli-1, i-37 yemitha yesikweri, kunye negumbi lokuhlala elinye, ikhitshi elinye kunye negumbi lokuhlambela elinye. ILacasit yindawo entsha yoluntu ngaphesheya kwesitalato esikhulu saseHua Hin, amanyathelo asuka eBluport, kwilali yeMarket kunye nomgama wokuhamba ukuya e-Hua Hin beach. Kukho indawo yokuqubha entle nenkulu kunye neyadi yokudlala yabantwana kule ndawo.
Le yicondo entsha, umgangatho olungileyo, indawo elungileyo, ngoku ixabiso elihle.Uya kuthanda ukuhlala apha ngexesha lakho leholide.Ndiyavuya kakhulu ukukwamkela ukuba uhlale kwi-condo yam kwaye ndikunike uncedo.
4.76 · Izimvo eziyi-46
indawo entle kakhulu:
1. Ukuya elunxwemeni: ukuwela isitrato esikhulu malunga ne-300m,
2. Ukuya kudederhu lweevenkile ezinkulu ezimbini: 450m ukuya kwicala lasekhohlo yiMakethe Village, 500m ukuya kwicala lasekunene yiBluport Mall.
3.Ukuya kwiindawo zokutyela, ii-pubs kunye neevenkile zokuphulula (Soi 94), umkhombandlela wesandla sasekhohlo 200m.
Isibhedlele se-4.Bangkok sisikhokelo sesandla sasekhohlo 100m
Umbuki zindwendwe ngu- Ning
Mna kunye ne-My hua hin abahlobo banokusikhathalela isicelo sakho, undazise.